I-Mews - i-cottage enembono emangalisayo
I-Mews yindlwana evaliweyo ebekwe kwindawo yabucala yeehektare ezingama-40 enembono ye-panoramic yeLake of Menteith, enesitovu esibaswayo ngamaplanga, ipatio egqunyiweyo yabucala, igasi yerhasi, iTV yefreesat, iDVD player, isikhululo sokumisa, ilinen yeNkampani eMhlophe.
Indawo yaseMondhui ikwiTrossachs kunye neLoch Lomond National Park. I-Trossachs yindawo yaseScotland "yesithili saseLake". I-Mondhui ngokwayo iye yaba yindawo yokuhlala ukususela kumaxesha angaphambili kwaye ngaphezu kwepropathi kukho "indebe kunye namakhonkco". Ngaphakathi kwemihlaba kukho ichibi elibhabhayo ledada elilungele ababukeli beentaka kwaye ecaleni kwendlwana kukho ichibi elincinci. Le ndawo yindawo yeentaka kunye nezinye izilwanyana zasendle ezibandakanya i-osprey, i-kites ebomvu, i-squirrels ebomvu, i-red deer, i-pine marten kunye ne-badgers. Ukusuka kumnyango wendlwana ungahamba uye ngqo kwi-Menteith Hills kwaye ujoyine iRob Roy Way enamakhulu eekhilomitha zendlela yehlathi efikeleleka ngokulula. I-cottage ibonelelwe ngendlela yangoku, yelizwe kunye neeyunithi zekhitshi ezenziwe ngamaplanga, ii-worktops zegranite kunye nomgangatho oqinileyo we-oki kulo lonke.
Ikwindawo efanelekileyo kwabo bathanda izinto zangaphandle ezibandakanya ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, igalufa, ukukhwela ihashe kunye nokuloba-iLake laseMenteith yeyona ndawo inkulu yokuloba iitrout zaseScotland. Ikwayindawo entle kwabo bafuna nje ukuzipholela kwaye ukonwabele umbono oqaqambileyo wechibi ukusuka kwiveranda egqunyiweyo, intendelezo okanye kwisofa epholileyo phambi kwesitshisi seenkuni. Isikolo sika-Nick Nairn esidumileyo saseCook sikumizuzu nje embalwa xa uqhuba njengeLake Hotel ethandwayo ebonelela ngokutya okulungileyo ngasechibini. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokujonga enye yezona ndawo zinomtsalane eSkotlani okanye uyisebenzise njengesiseko sokukhenketha kumbindi weSkotlani. Ngaphakathi kwemizuzu eli-10 ukusuka kwindlwana unokuba seAberfoyle, eCallander, eQueen Elizabeth Forest Park eDavid Marshall Lodge okanye uthathe isikhephe kwiSir Walter Scott ngesikhephe eLoch Katrine.
I-Stirling kunye nenqaba yayo yakudala yimizuzu engamashumi amabini kude. I-Scenic Loch Lomond, isiqingatha seyure kuphela ukusuka kwindlu. I-Gleneagles yimizuzu engama-40 yokuqhuba. Isixeko saseGlasgow esihlala abantu bonke singaphantsi kweyure xa uhamba ngePerth kunye ne-Edinburgh ngaphezu kweyure nje enye. Zininzi izakhiwo zembali, iinqaba kunye neendawo zokuhlambela iidiliya zokutyelela kule ndawo. Thenga iimayile ezi-4, i-pub kunye nevenkile yokutyela 1 imayile.
Iqabane lam uRonnie kunye nam siyakuvuyela ukukunceda ngalo naluphi na ulwazi oludingayo kunye nokwabelana ngolwazi lwethu lwasekhaya.